Ny fanangonam-bokatry ny fararano amin'ny vanim-potoana vaovao dia milaza fa tokony hifikitra amin'ny natiora. Ao anatin'ity vanim-potoana ity, ny fofona maimbo sy ny fanamafisana ny molotra malemy dia lasa malaza. Maro ny mpanamboatra soso-kevitra amin'ny vehivavy momba ny fampiasana Gothic motifs, indrindra fa amin'ny fananganana andavanandro.
Ny fironana lehibe amin'ny famoriam-bola amin'ny fararano 2013
Amin'ny vanim-potoanan'ny fararano vaovao, ireo mpanakanto dia mihaino hatrany ny maha-voajanahary azy amin'ny sary. Izy ireo ihany koa dia mandinika ny zava-misy fa ny 90% amin'ny fahombiazan'ny fanangonam-bolo rehetra dia miankina amin'ny menaka fanosotra voalanjalanja. Raha te hiresaka momba ny famoriam-bola famokarana lamaody amin'ny alàlan'ny lamaody, dia samy hafa ny tononkalo sy ny fialan-tsasatra. Tsy toy ny fizaran-taona farany, ny tànana manjavozavo eo amin'ny hodi-tselatra ambony dia lasa any ambadika, amin'izao fotoana izao ny fahazoana volomparasy na volomparasy no lasa nalaza. Ny loko eo amin'ny masonao dia azo atao amin'ny alokaloka voafidy tsara: ho an'ny zazavavy maitso, ny palitao beige-manga dia mifanandrify tsara, manga ny manga amin'ny manga. Ny hatsaran-tarehim-boron-damba mavomavo dia amporisihina mafy mba handinihana ny mason-koditra kely mavo. Aza manova loatra ny fiovan'ny taovam-pananahana . Ny marevaka dia heverina ho tsiratsiraka miaraka amin'ny dity voajanahary.
Ny famoriam-bola vaovao vaovao ao amin'ny lamina manokana dia manondro ny fitambaran'ny volo sy ny hoditrao. Amin'ny ankapobeny, loko marevaka marevaka mena dia tonga lafatra ho an'ireo zazavavy manana hoditra hafakely. Ny ankizivavy manana hoditra maivana dia tsara kokoa raha tsy mifantoka amin'ny pylor ary mampiasa jiro beige na voajanahary.
Raha ny fijerin'ny maso, tamin'ny vanim-potoana vaovao, dia nanapa-kevitra ny hanolotra alokaloka beige sy manga. Raha mampiasa aloka ianao, dia ataovy izay safidy tianao amin'ireto loko ireto. Ny fanavaozam-baovao amin'ny famoriam-bola amin'ny fararano dia ahitana ihany koa ny fampiharana ny tifitra retro miaraka amin'ny lipstika mena na loko mena. Ny endritsoratra klasika amin'ny "Smokey Ice", izay hita ao amin'ny modely farany dia mampiseho na ny volony na ny beige, ary ny loko marevaka, dia tsy nanary ny maha-zava-dehibe azy.
Ao amin'ny endriky ny molotra, ny lokon'ny lamaody lehibe dia tonon-tsarony sy voajanahary. Na izany aza, ny lipstick amin'ny lamaody indrindra dia mbola mena lipstick mena. Ankoatra izany, ny lipstick dia mamiratra - ny tsara kokoa.
Ny fironana lamaody farany 2014
Fashion manikika - ririnina-ririnina 2015-2016
Vehivavy mofomamy amin'ny 2016
Ny volo eo amin'ny vehivavy 2015 taona
Kiraro ny fahavaratra - lamaody 2014
6 akanjo fitafy izay hampivelatra ny fikarakaranao ny lohataona
Ny hoditra ambony
Ny akanjo sy ny akanjo dia mianjera amin'ny 2013
Collection Autumn Collection 2013
Mpaka sary an-tsaina
Central Park any New York
Jeans mikotrika amin'ny tanany
Toeram-ponenana varahina ho an'ny rindrina
Fanafoanana ny hatsembohana sy ny fofona tongotra
Pate ny aty atody ao an-trano
Lymphadenitis - Antony
Niresaka momba ny fahasalamany i Janet Jackson
Famoronana ho an'ny truffles any an-trano
Zana-bozaka toy ny zezika